I-ester yinkomfa yendalo apho i- hydrogen kwiqela le- carboxyl yenkampani ithathelwa indawo ye- hydrocarbon . Ama-Esters aphuma kwi-acids carboxylic (kwaye ngokuqhelekileyo) utywala. Nangona i-carboxylic acid ineqela--COOH, i-hydrogen ithathelwa indawo ye-hydrocarbon kwi-ester. I-formula yemichiza ye-ester ithatha ifom RCO 2 R ', apho R iindawo ze-hydrocarbon ze-carboxylic acid kunye neR' yiselo yotywala.
Igama elithi "ester" laqulunqwa ngumkhandi waseJamani uLeopold Gmelin ngowe-1848. Kungenzeka ukuba eli lixesha kwakuyi-contraction yegama lesiJamani elithi Essigäther , elithetha "i-acetic ether".
I-acetate ye-ethyl (i-ethanoate ye-ethyl) yi-ester. I-hydrogen kwiqela le-carboxyl ye-acetic acid ithathelwa indawo yeqela le-ethyl.
Ezinye imizekelo yeesters ziquka i-ethyl propanoate, ipropyl metethate, i-propyl ethanoate, kunye ne-methyl butanoate. I-Glycerides yi-ester fatty esters ye-glycerol.
Amafutha afana namafutha
Amafutha kunye namafutha yimizekelo yeesters. Ukwahlukana phakathi kwabo kukuxutywa kweesters zabo. Ukuba i-melting point is below temperatures of room, i-ester ithathwa njengeoli (umzekelo, ioli yemifuno). Ngakolunye uhlangothi, ukuba i-ester yomelele kwindawo yokushisa kwegumbi, kuthathwa njengotyebile (umzekelo, ibhotela okanye isinqumelo).
Ukuqanjwa kwamagama e-esters kunokudidanisa olutsha kubafundi bezakhemikhali eziphilayo ngoba igama lihambelana nomyalelo apho kubhalwe khona ifomu.
Kwimeko ye-ethanoate ye-ethyl, umzekelo, iqela le-ethyl lidweliswe phambi kwegama. "I-Ethanoate" ivela kwi-acid e-ethanoic.
Ngoxa i-IUPAC amagama eesters avela kumzali otywala kunye ne-asidi, ama-esters amaninzi aqhelekileyo abizwa ngamagama abo amancinci. Ngokomzekelo, i-ethanoate idla ngokuba yi-acetate, i-metetaneate yenziwe, i-propanoate ibizwa ngokuba yipropionate, kwaye i-butanoate ibizwa ngokuba yi-butyrate.
Ama-Esters athile anqabile emanzini kuba angenza njengabawamkeleli be-hydrogen bonds ukuze benze i-hydrogen bonds. Nangona kunjalo, abakwazi ukwenza njengabanikeli be-hydrogen-bond bond, ngoko bazinxulumani. I-Esters iyancipha ngaphezu kwe-acidi carboxylic acid, i-polar ngaphezu kwe-ethers, kunye ne-polar engaphezu kwe-alcohols. I-Esters inomdla wokuqhumisa. Basenokuthi bahluke omnye komnye usebenzisa i-chromatography yegesi ngenxa yokungabi nantoni.
Iipolyester zididi ezibalulekileyo zamaplastiki , eziququzelelwe zi-monomers ezixhunywe yi-esters. Isisindo esisezantsi se-molecular esters sisebenza njengama-molecule kunye neepheromones. I-Glycerides yi-lipids efunyenwe kwioli kunye nemfuyo yezilwanyana. I-Phosphoesters yenza i-DNA backbone. I-ester esitrate isetyenziswa ngokuqhelekileyo njengeziqhumane.
I-Esterification kunye ne-Transesterification
I-Esterification yigama elinikezelwa nayiphi na impendulo yamachiza eyenza i-ester njengemveliso. Ngamanye amaxesha impendulo ingabonwa yi-flority or floral fragrance ekhutshwe yindlela yokuphendula. Umzekelo we-ester synthesis reaction is Festcher esterification, apho i-carboxylic acid iphathwa ngotywala phambi kwento epholileyo. Ifom epheleleyo yempendulo yile:
Ukuphendula kuyaphupha ngaphandle kwe-catalysis. Isivuno sinokuphuculwa ngokungongeza utywala obuninzi, usebenzisa i-agent engumileyo (umz., I-acid sulfuric), okanye ukususa amanzi.
Ukutshintshwa kwe-Transesterification yindlela yokwenza iikhemikhali ezitshintsha enye i-ester kwenye. I-Acids kunye neziseko zenza ukuba uphendule. Ukulingana ngokubanzi kwendlela yokuphendula ngayo:
Yenza isiqhagamshelo esivela kwiDatabase ene-PHP
Magic Magic kunye neNkcubeko
Iincwadi ezingapheliyo - Iilwimi zasendulo ezilibalekile
Intsingiselo yegama elithi "Elikhulu" okanye "I-Master" ekukhunjweni
Oko Kufuneka Ukwazi Ngobudlelwane BamaKristu Abafana